Shiinaha Shiinaha boorsooyinka kartoo boorsooyinka-saareyaasha, shirkado, warshad - xigasho - Dongguan Zhihao Boorsada Warshadaha Co., Ltd.
Hoyga > Boorsooyin > Boorsada isboortiga > Boorsooyinka skateboardka
(1) Boorsada skate-ka waxay ka samaysan tahay 100% wax caag ah. Waxay ku siinaysaa laba jeeb oo waaweyn oo dibedda ah. Jeebladani waxtar weyn ayey u leeyihiin skateboard-ka. Jeebka yar ee bannaanka ayaa isna lagu soo daray. Ka hadlida arrimaha gudaha, boorsadani waxay bixisaa jeeb shaqeyn badan leh. Waxaa lagu heli karaa laba midab si looga hor tago saameynta iyo shilalka iman kara.
(2) Aad ugu habboon qaadashada kombuyuutarrada gacanta iyo qalabka kale gudaha. Muhiimadda muhiimka ahi waxay tahay inaad sidoo kale u isticmaali karto boorsadan waxqabadyo kale. Waa mid aad loola qabsan karo oo raaxo leh. Waxay leedahay gacan-qabsi sare oo caag ku daboolan iyo suunka garbaha oo aad u jilicsan
(3) Faa'iidada ugu wanaagsan ee lahaanshaha shandaddan gacan-yaraha ah ayaa ah inaad keento qashin laptop ah, boorsada gacmeedkan ayaa sidoo kale ku qalabaysan jeebka looxa dhogorta leh. Tani waa dhibic gunno ah, waad wada keeni kartaa labadaba. Hooska iyo muraayadaha indhaha, boorsadani waxay leedahay boorso kale oo dhogor ah. Waxaan kugula talineynaa inaad marka hore isticmaasho kiiska muraayadaha jilicsan ee jilicsan, ka dibna ku kaydi boorso yar.
(4) Laba xargo oo si toos ah u-xirxiran ayaa xaqiijin kara xasilloonida skateboard-ka. Waxay qaadi kartaa cabir kasta. Awoodda guud ee boorsadani waa 27 litir. In kasta oo aanu aad u ballaadhnayn, haddana weli si fudud ayuu u qabsan karaa qaar ka mid ah waxyaabaha aad u baahan tahay.
(5) Rugsan oo adkeysi leh, waxay la jaan qaadi kartaa dhammaan dhinacyada nolashada skater-ka casriga ah. Dhinacyada, hoose iyo gadaasha gadaal ayaa loo xoojiyay inay iska caabiyaan dhammaan nabarrada dhabarka dambe ee boorsooyinka si lama filaan ah u xanuunsada. Boorsada skateboard-ka kaliya ma leh kiiska laptop-ka gudaha lagu duubay, laakiin sidoo kale kiiska kiniiniga, sidaa darteed haddii aad wax ka ogaato tiknoolajiyada, waad la qaadan kartaa meel kasta oo aad joogto. Tan waxaa ku jira taleefankaaga casriga ah maxaa yeelay sidoo kale waxay leedahay boorso. Xaqiiqdii, waxaa jira boorsooyin gudaha iyo dibaddaba oo qaadi kara ku dhowaad wax kasta oo aad ugu baahan tahay inaad ku qaadatid.
(6) Isku-xirka USB-ga ee dibadda wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku siiso adeegyo lacag-bixin ah taleefankaaga gacanta iyo qalabka fiidiyowga wakhti kasta.
2. Boorsada skateboardka product parameters (specifications)
Boorsada skateboardka garabka bidix ee taagan
Dhererka 47cmX Width 28cmX Dhererka 12cm
3. Sidee loo doortaa boorsada skateboard-ka ugu fiican?
Haddii aad jeceshahay skateboarding iyo skateboardingboardboard, ka dibna waxaad ogtahay in qalabku muhiim u yahay badbaadadaada iyo raaxadaada. Maadaama gacmahaagu mashquul ku ahaanayaan isku dheelitirnaanta, waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho boorso.
Laakiin waxaa jira noocyo badan oo boorsooyin ah, way adag tahay in la doorto boorsada saxda ah. Tilmaamahan soo socda ayaa kaa caawin doona inaad hesho boorsada skate-ka ugu fiican isla markaana go'aamiso boorsadaada ugu fiican!
(1) Marka hore, waxaad ubaahantahay inaad go'aamiso ujeedada boorsada. Waxaad ugu hibeyn kartaa skateboard-ka iyo dusha sare ee dusha ama hawlo kale. Boorsooyinka qaarkood waxay leeyihiin jeebab badan, taas oo ka dhigaysa iyaga kuwo ku habboon ujeedooyin badan. Haddii aad qorsheyneyso inaad laptop qaadato, dooro laptop la meel bannaan oo gudaha ah ku filan.
(2) Boorsada skateboard-ka ugu fiican waxay noqon doontaa mid wax ku ool ah oo fudud. Kadib markaad go’aansato waxaad ubaahantahay, fiiri baahiyaha daboolaya inta badan baahiyahaaga sida ugu macquulsan
(3) Feejignaan gaar ah ayaa laga yaabaa in la siiyo qaabka iyo naqshadeynta boorsooyinka dhabarka lagu dhejiyo. Si kastaba ha noqotee, fadlan isku day inaadan kor uga dhigin tayada iyo waxqabadka. Boorsooyinka skateboard tayo sare leh oo leh midabbo kala duwan ayaa laga heli karaa suuqa. Waxaad dooran kartaa inaad isticmaasho hal midab ama midabbo badan oo boorsooyinka dhabarka lagu dhejiyo. Kahor go'aaminta muuqaalka, hubi inaad hubiso dhammaan shuruudaha kale marka hore.
5. Boorsada skateboardka packaging and delivery
(2) Cabbirka baakadka caadiga ah: dhererka 47cmX ballac 28cmX dherer 12cm ah, waxaannu u habeyn karnaa cabbirka baakadka naqshadeynta hadba baahidaada, si loo badbaadiyo xamuulka.
(3) faahfaahinta xirxirida: 49cm X 30m X 50cm. 10PCS / kartoonka Waxyaabaha kartoonka: K = K 5-lakab warqad jiingado qaro weyn leh.
(8) Haddii loo baahdo, waxaan naqshadeyn doonnaa baakidhka boorsada dhabarka lagu duubo iyadoo la raacayo shuruudahaaga.
(9) Hadaad ubaahantahay shaybaarka boorsada dhabarka, waxaan dooran doonaa inaan hawada kuugu soo dirno.
Jawaab: (1) Haa, waxaan aqbalnaa kormeerka qeybta saddexaad.
(3) Waxaan nahay soo saare boorsooyinka Disney skateboard, boorsooyinka Wal-Mart iyo alaabada Samsonite. Fadlan ku kalsoonow tayada wax soo saarka.
Calaamadaha kulul: Boorsooyinka skateboarding, Shiinaha, saarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, habeysan, qiimaha, xigashada, keydka